Sucuudi Carabiya oo Qarka u saaran in israaiil ay aqoonsato. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Sucuudi Carabiya oo Qarka u saaran in israaiil ay aqoonsato.
Sucuudi Carabiya oo Qarka u saaran in israaiil ay aqoonsato.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa qorsheyneysa in ay hagaajiso xiriirka ay la leeyahay Maamulka Israel sida ay qoreyaan Qaarkaamid ah warbaahinta Bariga dhexe oo Soo xiganeya ILo muhim ah oo dhinaca Boqortooyada ah.
Wareysi uu siiyay telefeshin Mareykanka laga leeyahay usbuucii la soo dhaafay, wasiirka Arimaha Dibada Boqortooyada Sucuudiga Faysal Bin Farhan al-Saud ayaa ku sheegay in Xiriirka Israaiil iyo Sucuudiga ay wax weyn ka tari donto dhaqaale ahaan, bulsho ahaan, iyo dhinaca amniga Gobalka.
Tallaabada ay Sacuudi Carabiya ku doonayso inay caadi ka dhigto [xiriirka] ay la leedahay Israa’iil waa khiyaanadii ugu dambaysay, oo aan ku koobnayn oo keliya halganka Falastiiniyiinta laakiin dhammaan Umadda Muslimiinta ah dhibaato ku ah, sidaasi waxaa yiri, inta badan Ururada Muslimiinta.
Previous articleRaisal wasaare Rooble oo booqday xarunta gurmadka deg deg ah ee Covid 19
Next articleMaleeshiyo gacansaar la leh kooxda Daacish oo afduubtay 20 qof.
Waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday dhaqtarkii Soomaaliya ugu wanaagsanaa daaweynta cudurada neef-mareenka ku dhaca iyo Tiibashada Dr. Xeydar Cali Raage oo ku takhasusay cudurka...
baaritaankii Dilkii George Floyd oo lagu soo gaba gabeeyay magaalada...
Muuse Biixi oo cafis u fidiyay maxaabiis gaareysa 484 oo...